Kedu ihe bụ meteorite: njirimara, nhazi na ụdị | Meteorology netwọkụ
Portillo nke German | 01/09/2021 17:39 | Astron
A na -ahụkarị meteorites na fim mgbe ha na -ada na ụwa anyị. Enweela ọtụtụ okwu gbasara mkpochapụ nke dinosaurs n'ihi mmetụta meteorite na gburugburu ebe obibi anyị. Agbanyeghị, enwere ọtụtụ ndị amaghị nke ọma kedu ihe meteorite n'ụzọ nkà na ihe ịdị adị ya pụtara.
Yabụ, anyị ga -arara akụkọ a ka ọ gwa gị ihe niile ịchọrọ ịma gbasara ihe meteorite bụ, njirimara ya na ụdị ya.
1 Kedu ihe bụ meteorite
3 Mepụta meteorite
4 Ụdị meteorites
5 Esemokwu na asteroids
Enwere ike ikwu nkọwa nke meteorites dị ka ibe nke ahụ dị na mbara igwe nke dara na mbara ụwa ma ọ bụ na kpakpando ọ bụla ọzọ. Nke a na -egosi na ahụ okwute ahụ ga -enwerịrị ike iru elu nke kpakpando na -ahapụ ụzọ nke ìhè nke anyị na -akpọ meteor.
Yabụ, meteorites enweghị ike ịda naanị n'ụwa, kamakwa iru kpakpando ọ bụla ọzọ: Mars, Venus, elu ọnwa, wdg
Banyere ụwa, o nwere ihe mgbochi okike sitere na ya iji guzogide ihe a: ikuku. Igwe gas a nwere ike ime ka ihe ka ọtụtụ n'ime ihe na -eme n'etiti mbara ikuku nke na -erute na ikuku mebie tupu ọ daa n'elu.. Nnukwu meteorites na -agbaji n'ime obere iberibe, ụfọdụ n'ime ha nwere ike rute n'ala.
Mgbe ha gafere, ha na -emepụta meteors anyị kwuru na mbụ. Mgbe bọmbụ ọkụ ndị a na -agbawa na ikuku, a na -akpọ ha ọkụ ọgbụgba. Ọtụtụ meteorites bụ ihe a na -apụghị ịhụ anya ma ọ bụ microscopic mgbe ha rutere n'elu. Agbanyeghị, enwere ike ịchọta ndị ọzọ maka nyocha na nyocha ọzọ.
Meteorites nwere ọdịdị na -adịghị agbanwe agbanwe na ngwakọta kemịkal dị iche iche. A na -eme atụmatụ na meteor rock dị ukwuu karịa meteors metal ma ọ bụ meteors metal (ọ dịkarịa ala dabere na mmetụta ụwa). Dị ka comets, ọtụtụ n'ime ha nwere ihe sitere na nhazi usoro mbara igwe, nke nwere ike inye ozi sayensị bara uru.
Meteorites na -adịkarị site na sentimita ole na ole ruo mita ole na ole, ma na -anọkarị n'etiti oghere nke emepụtara mgbe ha dara. Ọ bụ ya mere achọpụtara ọtụtụ n'ime ha mgbe ha na -atụ anya ala ala narị afọ ma ọ bụ puku afọ ka e mesịrị.
A na -eme atụmatụ na gburugburu meteorites 100 nke nha na ihe dị iche iche na -abanye na mbara ala anyị kwa afọ, ụfọdụ pere mpe ma ndị ọzọ karịrị otu mita n'obosara. Imirikiti ihe ndị na -abata na ikuku anaghị enwe nzere esemokwu na mgbada mgbada ha, mana ọtụtụ ihe ndị ọzọ nwere ike. Ọ bụrụ na onye akaebe hụrụ mmetụta ya na ala, a na -akpọ ya 'ọdịda', ma ọ bụrụ na achọpụtara ya ka emechara, a ga -akpọ ya 'nchọpụta'.
Edebanyela aha ma debanye aha ihe dị ka 1.050 dara na ihe dị ka nchọpụta 31.000. A na -enye ndị meteorite aha ebe achọtara ha ma ọ bụ hụ ọdịda ha, na -esochi ọnụ ọgụgụ na mkpụrụedemede iji mata ha na meteorites ndị ọzọ dabara n'otu mpaghara.
Meteorites nwere ike isi n'ọtụtụ ebe. Ụfọdụ bụ naanị ihe fọdụrụ site na nhazi (ma ọ bụ mbibi) nke ihe ndị dị na mbara igwe buru ibu (dị ka satellites ma ọ bụ mbara ala). Ha nwekwara ike ịbụ iberibe nke asteroids, dịka ndị juputara na eriri asteroid n'etiti mbara ala dị n'ime na mbara ala mpụta nke usoro mbara igwe anyị.
N'ọnọdụ ndị ọzọ, ha kewapụrụ onwe ha na comet, na -efufu obere ntakịrị n'oge ha. Mgbe ha nwetasịrị otu n'ime mmalite ndị a, ha ka na -ese n'elu mmiri ma ọ bụ tụba n'ime oghere na oke ọsọ n'ihi mgbawa ma ọ bụ ihe ndị ọzọ yiri ya.
Dabere na mbido, ihe mejupụtara ma ọ bụ ogologo ndụ nke meteorites nwere, a na -ekewa ha n'ụdị dị iche iche. Ka anyị hụ nke bụ nhazi kacha mkpa dịka usoro ndị a niile siri dị:
Meteorites oge ochie: A na -akpọkwa meteorites ndị a chondrites wee si na nhazi usoro mbara igwe. Yabụ, ha agaghị agbanwe site na usoro mmụta ala dị iche iche wee bụrụ ndị na -agbanweghị agbanwe ihe dị ka ijeri afọ 4.500.
Carbonaceous chondrite: Ekwenyere na ọ bụ ha bụ chondrites kacha anya site na anyanwụ. N'ime ihe mejupụtara ya, anyị nwere ike ịhụ 5% carbon na 20% mmiri ma ọ bụ ihe ndị dị iche iche na -emepụta ihe.
Chondrites nkịtị: Ha bụ chondrites ndị na -erute ụwa. Ha na -esitekarị na obere asteroids, a na -ahụkwa ígwè na silicate na nhazi ha.
Chondrite gụnyere: Ha hiri nne nke ukwuu, mana ihe mejupụtara ha bụ naanị nke yiri nhazi mbụ nke ụwa anyị. Ya mere, ndị ọkà mmụta sayensị kwenyere na nchịkọta ha ga -eme ka e kee ụwa anyị.
Meteorites agbazere: ụdị meteorite a bụ nsonaazụ ngwakọ ma ọ bụ zuru oke nke isi ahụ sitere na ya, wee banye usoro metamorphic n'ime.
Ndị Achondrites: Ha bụ oke okwute nke sitere na ihe ndị ọzọ dị na mbara igwe na sistemụ mbara igwe. Maka nke a, aha ha nwere njikọ na mbido ha, n'agbanyeghị na ọtụtụ n'ime ha nwere mmalite amabeghị.
Igwe: Ihe mejupụtara ya dabere na ihe karịrị 90% ọla, na mbido ya bụ ntọala nke nnukwu asteroid, ewepụtara na nnukwu mmetụta.
Metalloros: Ihe mejupụtara ya hà nchara na silicon. Ha na -esi n'ime nnukwu asteroids abịa.
Esemokwu na asteroids
N'ọnọdụ ụfọdụ, a na -eji okwu meteorite na asteroid agbanwere. Agbanyeghị, nke a abụghị eziokwu kpamkpam, enwere ọtụtụ ọdịiche dị n'etiti echiche abụọ a.
Asteroids Ha bụ ihe elu -igwe dị okwute nke na -agagharị anyanwụ na Neptune, na -agbagharịkarị n'etiti Mars na Jupiter. Meteorite bụ obere irighiri ihe nke asteroid nke nwere ike irekasị na ikuku wee rutekwa n'elu ụwa.
Dabere na ọnọdụ ha na sistemụ mbara igwe, ọ bụrụ na ha na -agagharị n'etiti Mars na Jupiter, enwere ike ịkewa ha dị ka ndị asteroid belt, ọ bụrụ na ha na -agagharị na nso ụwa, enwere ike ịkewa ha dịka NEA ma ọ bụ asteroid, ma ọ bụrụ na ha nọ na okirikiri. nke Jupiter. , bụ nke Trojans, ma ọ bụrụ na ha nọ na mpụga sistemụ mbara igwe nke ụwa ma ọ bụ n'otu asteroids na orbit, n'ihi na ike ndọda ụwa jidere ha.
Enwere m olile anya na site na ozi a, ị ga -amụtakwu ihe meteorite bụ na njirimara ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Astron » Kedu ihe bụ meteorite